Inona no atao hoe TV sy Monitor Bias Lighting? - Jiro MediaLight Bias Lighting
Inona no atao hoe TV sy Monitor Bias Lighting?
Inona no atao hoe jiro bias ary nahoana no maheno isika fa tokony ho avo CRI miaraka amin'ny mari-pana miloko 6500K?
Ny jiro bias dia loharanom-pahazavana izay mivoaka avy ao ambadiky ny fampisehoana anao, manatsara ny fahitana fahita amin'ny fahitalavitra na monitor anao, amin'ny fanomezana loharanom-pahalalana tsy miova ho an'ny masonao. (Tsy miresaka jiro LED miloko zava-baovao aho izay mamadika ny efitranonao ho disko).
Inona no ataon'ny jiro bias?
Ny jiro fanavakavahana mety dia mitondra fanatsarana telo lehibe eo amin'ny tontolon'ny fijerinao:
Voalohany, mampihena ny fihenan'ny maso izany. Rehefa mijery amin'ny tontolo maizimaizina ianao dia afaka mandeha mainty tanteraka mankamin'ny sehatra mamirapiratra imbetsaka mandritra ny seho na horonan-tsary. Ny mpianatry ny masonao dia mila manitsy haingana ny haizina tanteraka amin'ity mazava mamirapiratra ity ary, mandritra ny fijerin'ny hariva, dia mety harerahana havizanana be ianao. Ny jiro bias dia manome antoka fa ny masonao dia manana loharano maivana ao an-trano foana nefa tsy mihemotra, na tsy taratra ny fisehoanao. Ity no iray amin'ny antony ilana ny jiro mitongilana amin'ny filan'ny fahitalavitra OLED, izay afaka mainty mainty, na HDR set, afaka mamiratra ambony.
Faharoa, ny jiro fitongilanana dia manatsara ny fahasamihafana hita amin'ny fampiratiana anao. Amin'ny fanomezana referansa maivana kokoa ao ambadiky ny fahitalavitra, ny mainty aseho dia miseho mainty kokoa raha ampitahaina. Azonao atao ny mahita ny fomba fiasan'io amin'ny fijerena ity kisary ity. Ny mahitsizoro volondavenona eo afovoany dia aloky ny volondavenona iray ihany, fa rehefa manazava ny faritra manodidina azy isika dia tsapan'ny atidohantsika fa mihamaizina izy io.
Ary farany, ny jiro fitongilanana dia manome tondro fotsy ho an'ny rafitry ny fahitana anao handanjalanjana ny loko eo amin'ny efijery. Amin'ny alàlan'ny fanolorana ny fanahafana ny D65 fotsy namboarina akaiky indrindra sy maharitra indrindra, ny MediaLight no vokatra tsara indrindra eny an-tsena hatreto mba hahatratrarana ny lokon'ny lokony.
Ny MediaLight dia fitambaran-jiro LED ColorGrade ™ mitarika indostrialy amin'ny tsipika adhesive, izay manome vahaolana jiro tsotra sy mahery ho an'ny rindranasa rehetra. Mora apetraka ao anatin'ny minitra vitsy izy io ary, amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, mandeha amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo USB fahitalavitra ianao, midika izany fa hivadika sy hamono eo akaikin'ny fahitalavitra anao ny MediaLight. Izany dia mahatonga ny MediaLight ho fametrahana "napetraka ary manadino" ary, rehefa heverinao fa ny hazavana hazavana MediaLight rehetra dia tohanan'ny fiantohana mandritra ny dimy taona, dia midika izany fa mora ny fanavaozana sanda tsara indrindra azonao atao amin'ny tontolon'ny fialamboly an-tranonao.
Saingy tsy natao ho an'ny fampiharana teatra an-trano ihany io - ny MediaLight dia ampiasaina amin'ny tontolo mavitrika fanaovana loko. Raha ny marina, ny fianakavian'i MediaLight dia misy jiro birao sy takamoa D65 namboarina izay samy manana ny kapila 98 CRI sy 99 TLCI ColorGrade ™ Mk2 LED mitovy amin'ny tadin'ny MediaLight, ary tohanan'ny fiantohana telo taona.
Mety hieritreritra ianao fa tsy mandray soa amin'ny jiro fitongilanana ny OLED, fa ianao kosa tsy diso. Noho ny haavon'ny mainty tsara kokoa sy ny tahan'ny fifanoherana avo lenta amin'ny fampisehoana OLED sy Micro LED, ny fihenan'ny maso dia ahiana lehibe kokoa.
Milaza ianao fa tsy mahatsapa fihenan'ny maso? Ny famirapiratana hita na ny maizina amin'ny fisehoana dia mbola azo hatsaraina ary ny fifanoherana dia mihombo hatrany, na inona na inona fahaizan'ny fampisehoana.
Amin'ity sary manaraka ity dia manolotra efamira fotsy roa eo afovoan'ny marika miampy mainty. Iza amin'ireo no toa mamiratra kokoa?
Samy tsy mitovy izy ireo, ary samy voafetra amin'ny famirapiratan'ny fampirantianao.
Na izany aza, raha nilaza ianao fa toa mamirapiratra kokoa ny kianja fotsy eo ankavia, vao avy niaina ny fomba fitomboan'ny jiro mitongilana ianao. Diso hevitra ny olona maro fa ny jiro bias dia manatsara ny antsipirian'ny alokaloka ihany. Ankehitriny ianao dia afaka manaporofo fa diso izy ireo. Ny jiro bias dia manatsara ny fifanoherana hita amin'ny alàlan'ny manontolo elanelana mahery vaika -– tsy aloka fotsiny!